पाँच तरिका उत्तरदायी डिजाइन एसईओ परिवर्तन हुँदैछ | Martech Zone
पाँच तरिकाहरू उत्तरदायी डिजाइन एसईओ परिवर्तन हुँदैछ
मङ्गलबार, अप्रिल 9, 2013 सोमवार, जुन 10, 2013 जेसन डीएमर्स
उत्तरदायी डिजाइन स्पष्ट एक ठूलो सम्झौता हो; यति ठूलो कुरा कि Mashable २०१ responsive लाई "उत्तरदायी डिजाइनको वर्ष" को रूपमा स्वागत गरिएको छ। अधिकांश वेब पेशेवरहरूले यसलाई बुझ्छन् - उत्तरदायी डिजाइनले इन्टरनेटको रूपमा देखिन्छ, महसुस गर्दछ, र काम गर्दछ।
त्यहाँ कम स्पष्ट केहि भइरहेको छ, यद्यपि। उत्तरदायी डिजाइन SEO परिवर्तन गर्दछ। जब हामी उत्तरदायी डिजाइनको CSS भन्दा बाहिर हेर्छौं, हामी खोज अभ्यासमा एक प्रमुख पाली देख्छौं जुन दुबै मोबाइल र डेस्कटप खोजीहरूमा प्रभाव पार्दै छ।
उत्तरदायी डिजाइन को आगमन द्वारा ल्याइयो एसईओ मुद्दाहरु के हुन्? यहाँ पाँच छन्।
१. गुगलले उत्तरदायी डिजाइन मनपराउँदछ, यसको मतलब खोजी परिणामहरूले सम्भावित उत्तम अभ्यासहरू प्रयोग गर्ने साईटहरूलाई मनपर्दछ।
जबकि हामी Google लाई आरडब्लुडीको प्रेममा परेको छ भनेर स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्न हिचकिचाउँदछौं, हामी आरडब्लुडी उत्तम अभ्यासहरूको लागि एक जोडदार सम्बन्ध पहिचान गर्न सक्दछौं। पछि गुगलको ब्लग पोष्ट उत्तरदायी डिजाइनको बारेमा, SEO राउन्ड टेबलले कारणहरू बाह्यरेखा गर्दै एक लेख प्रकाशित गर्‍यो किन गुगल लाई उत्तरदायी डिजाइन मन पर्छ। तीन कारणहरू - गैर-नक्कल सामग्री, कुनै प्रमाणित URL मुद्दाहरू, र कुनै पुनर्निर्देशन समस्याहरू - सबै एक मजबूत एसईओ शस्त्रागारको हिस्सा हो।
जब Google फ्लिन्च हुन्छ, सबैजना उफ्रन्छन्। त्यसो भए यो उत्तरदायी डिजाइनको साथ हो। गुगलले वास्तवमै लेखेको हुनाले मोबाइल प्लेबुक, यसले केवल उनीहरूको मोबाइल र उत्तरदायी उपनिवेशहरूको लागि उचित सम्मान दिनको लागि बुझ्दछ। एल्गोरिदम २०१ 2013 मा र यसको पछाडि ट्वीक हुने क्रम जारी रहदा, हामी सायद साइटहरूमा अधिक र अधिक सम्भाव्यता देख्नेछौं जुन सफलतापूर्वक उत्तरदायी डिजाइन प्रयोग गर्दछ।
यदि गुगलले उत्तरदायी डिजाईन मन परायो भने, त्यो खोजीको लागि विशाल गेम परिवर्तक हो।
२. मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले राम्रो अनुभवको लालसा गर्छन्, र उत्तरदायी साइटहरूले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको लागि इष्टतम साइट गुणवत्ता प्रदान गर्दछ।
माथिको बिन्दु अलि जटिल रहेको छ। जे होस्, यो एसईओ को लागी एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। यहाँ कसरी काम गर्छ भन्ने छ।
अधिक र अधिक प्रयोगकर्ताहरू मोबाइल हुन्। तपाईंको वेबसाईटले अब पहिले भन्दा धेरै मोबाइल आगन्तुकहरू प्राप्त गर्दैछ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्; जाँच गर्नुहोस् विश्लेषण। ती सबै मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूलाई राम्रो अनुभव चाहिन्छ। उनीहरूको अनुभव जति राम्रो हुन्छ, राम्रो तपाईंको SEO। यहाँ किन छ।
साइटको गुणवत्ता महत्त्वपूर्ण SEO कारक हो। उच्च बाउन्स दर साइट गुणको बिरूद्ध एक ठूलो हडताल हुन सक्छ। राम्रो तपाईंको प्रयोगकर्ता अनुभव, तपाईंको एसईओ मूल्य अधिक। जब एक मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू एक अप्टिमाइजेसन वा उत्तरदायी साइटको भ्रमण गर्छन्, त्यहाँ अधिक सम्भावना हुन्छ कि उनीहरूले बाउन्स गर्नेछन्, बिस्तारै तपाइँको साइटको गुणस्तर बिगार्न। क्वालिटी र यूएक्सको बारेमा यो पोइन्ट क्रिस्टिना क्लेड्जिकको सम्पूर्ण तर्क हो जसको Moz मा लेख प्रत्येक साइटले उत्तरदायी स्विच गर्नु पर्छ भनेर केस बनाउँदछ।
एसईओ जान्छ, यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण उत्तरदायी मुद्दा हो। तिनीहरूकोमा उत्तरदायी डिजाइन को छलफल, Smashing Magazine भन्छ, "सब भन्दा महत्वपूर्ण मेट्रिक वेबसाइट प्रयोगकर्ताका लागि कत्तिको कार्यात्मक हुन्छ," र जवाफदेही साइटहरू आवश्यक छ भनेर जोड दिन्छ।
बढ्दो मोबाइल श्रोतालाई राम्रो सेवा दिनको लागि, तपाईंले उनीहरूलाई आवश्यक भएको प्रयोगकर्ता अनुभव दिन आवश्यक छ। यो साइटको गुणस्तर संरक्षण र राम्रो खोज र्याकिंग प्राप्त गर्ने एक मात्र तरिका हो।
Responsive. उत्तरदायी साइटहरू राम्रो अनुक्रमणिका हुन्छन्, र यसैले उच्च खोजी परिणामहरू।
गुगलको सहज ज्ञान एल्गोरिदम र स्विचबोर्ड ट्याग को लागी धन्यवाद, साइटहरु सही उपयोग गरीएको छ मोबाइल उपयोगकर्ताहरु लाई। जे होस्, उत्तरदायी साइटहरू स्वच्छ, छिटो, र सटीक अनुक्रमणिका प्रक्रियाको लागि उत्तम विकल्प हो।
गुगलको अनुक्रमणिका प्रक्रियाहरूले शुद्ध उत्तरदायी दृष्टिकोण प्रयोग गर्ने साइटहरूलाई अनुकूलित गर्दछ जस्तो देखिन्छ, ती “साइटहरू जसले यूआरएलको समान सेटमा सबै यन्त्रहरू सेवा गर्दछ, प्रत्येक यूआरएलको साथ सबै यन्त्रहरूमा समान एचटीएमएल सेवा गर्दछ र पृष्ठमा कसरी रेन्डर गरिएको छ परिवर्तन गर्न केवल CSS प्रयोग गर्दछ। उपकरण यो भाग हो गुगलको मार्गनिर्देशन "स्मार्टफोन-अनुकूलित वेबसाइटहरू निर्माण गर्न", जुन तपाईं मूल रूपमा "खोज इञ्जिन अनुकूलित वेबसाइटहरू" मा अनुवाद गर्न सक्नुहुनेछ। अझ के, तिनीहरू स्पष्ट रूपमा भन्छन्, "यो गुगलको सिफारिश कन्फिगरेसन हो।"
यदि तपाईं आफ्नो साइट छिटो र उत्तम तरिकामा Google द्वारा अनुक्रमित गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यस मुद्दामा उनीहरूको शब्द लिन सक्नुहुन्छ: उत्तरदायी डिजाइन प्रयोग गर्नुहोस्। उनीहरूको सल्लाह अनुसरण गर्नुहोस्, र जब ती अनुक्रमणिका र खोजी क्रमशः मा आउँछ तिनीहरू सही तरीकाले व्यवहार गर्दछन्।
Content. सामग्री र सामग्री स्थिति पहिले भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण छन्।
उत्तरदायी डिजाइन सबै एक वेबसाइट बाट अधिक बोसो ट्रिमिंग को बारे मा छ। "ट्रिमिंग फ्याट" खतरनाक छ, यद्यपि। तपाइँ सावधान हुनुपर्दछ SEO काट्ने र काट्ने क्रममा ट्रिम नगर्नुहोस्।
साइटको एसईओ मूल्य कायम गर्न, सबै सम्बन्धित सामग्री पृष्ठको शीर्ष तिर धकेल्नु पर्छ। कारण? अधिकतम एसईओ मूल्य कायम गर्न, साइटसँग दुबै मोबाइल र डेस्कटप संस्करणहरूमा माथिको-द-फोल्ड सामग्री हुनुपर्दछ। खोजी ईन्जिनहरूले सामग्री प्लेसमेन्टको पनि मूल्याate्कन गर्छन् सामग्री नै। स्थिति महत्त्वपूर्ण छ।
धेरै उत्तरदायी डिजाइनर र विकासकर्ताहरूले पृष्ठको शीर्षमा ग्राफिक्स, स्लाइडर, र स्पेस-होगिंग मेनूहरू मन पराउँछन्। यस्तो अव्यवस्थाले SEO को लागि समस्या खडा गर्न सक्छ। अधिक र अधिक साइटहरूले सामग्री-संचालित साइटहरूको न्यूनतमता र सरलताको पक्षमा छन्। ओडवर्ड्स २०१ content को नम्बर एक वेब डिजाइन प्रवृत्ति को रूपमा "सामग्री पहिलो" परिभाषित गरिएको छ। यसले एसईओ, युएक्स, आरडब्ल्यूडी, सीआरओ (र तपाइँ त्यहाँ बाहिर फ्याँक्न चाहानु भएको कुनै पनि अन्य एक्रोनिमको बारेमा) शुद्ध अर्थ राख्छ। चीजहरूलाई शिप-आकारमा राख्न, त्यो बहुमूल्य SEO- मायालु सामग्री पृष्ठको शीर्षमा ल्याउनुहोस्।
Mobile. मोबाइल यूआरएलहरू, उत्तरदायी साइटको सट्टामा, अझै SEO को लागि विकल्प हो।
RWD मा महामारीको भीडको बावजुद, केही व्यवसायीहरू अझै पनि मोबाइल यूआरएल दृष्टिकोणको वकालत गर्दैछन्। Bryson Meunier आफ्नो मामला मा आफ्नो स्पष्ट बनाउँछ खोज इञ्जिन भूमि लेख: "उत्तरदायी वेब डिजाइन अझै पनी एसईओ को लागी उत्तम विकल्प को लागी अपरिचित प्रतिष्ठा छ। वास्तविकतामा, मोबाइल यूआरएलहरू सकेजति एसईओ को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन। "
हो, त्यो कीराको धेरै धेरै विशाल छ। [उनीहरूको मनपर्ने स्थितिमा पंडितहरू भ्वाइसराइटिंग प्रविष्ट गर्नुहोस्।] धन्यबाद, गुगलले अब साइट संस्करणहरू भिन्न गर्न सक्दछ। यसैले, एसईओ उद्देश्यका लागि एक यूआरएल आग्रह एक गैर-तर्क हो, स्विचबोर्ड ट्यागको परिचयलाई धन्यवाद।
मेनुयरले केस बनाउँदछ कि मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले बिभिन्न रूपमा खोजी गरिरहेका छन् र विभिन्न जानकारीहरू खोजिरहेका छन्, डेस्कटप प्रयोगकर्ताहरू भन्दा फरक छन्। (म संशयवादी छु।) तसर्थ, उनले भन्छन, तिनीहरू राम्रोसँग साइट द्वारा सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ जुन उनीहरूलाई र उनीहरूको आवश्यकताको लागि विशेष रूपमा सिर्जना गरिएको हो - अर्थात् गतिशील रूपमा सेवा गरिएको साइट। थप रूपमा, मेनुयरले वेगको मोबाइल साइटको सम्भावित महत्त्वलाई साइट गति र यूएक्सडीको दृष्टिकोणबाट जोड दिन्छ, फेरि कसैको मोबाइल बजारका फरक दर्शकहरूलाई जोड दिन्छ।
उत्तरदायी डिजाइनको एसईओ मूल्य निर्धारण एक दर्शकमा निर्भर गर्दछ। यद्यपि आरडब्लुडीको अत्यधिक प्रयास गरिएको र एसईओ होली ग्रिलको रूपमा व्यापक रूपमा स्वागत गरिएको छ, केहि कम्पनीहरूले एक एसईओ रणनीति छनौट गर्न सक्दछन् जुन सख्त उत्तरदायी दृष्टिकोणको सट्टा मोबाइल यूआरएलहरू समावेश गर्दछ। अगाडि बढ्ने सामान्य नियमको रूपमा, तथापि, उत्तरदायी समाधान SEO पावरको लागि उपयुक्त देखिन्छ। जे भए पनि तपाईको मूल युआरएलको कालक्रम प्राधिकरणलाई कायम राख्ने, तपाईको दृष्टिकोणलाई सरल बनाउने, र तपाईको सामग्री व्यवस्थापनलाई सरल बनाउने सबै एसईओ उत्तम अभ्यासहरू हुन् जुन उत्तरदायी डिजाइन प्याकेजको हिस्सा हुन्।
सबैले बुझ्दछन् कि एसईओ लगातार परिवर्तन हुने क्षेत्र हो। नयाँ जानकारी र कहिलेकाँही विरोधाभासी जानकारी प्रति घण्टाको आधारमा प्रकाशित हुन्छ। कसैले पनि हैरान भएन कि उत्तरदायी डिजाईन एसईओ परिवर्तन गर्दैछ। वास्तविक आश्चर्य आश्चर्यजनक परिवर्तनहरू हुन सक्छन् कसरी महत्वपूर्ण मा आउन सक्छ। सही रूपमा खोजीमा सफल हुनको लागि, साइटहरूले प्रतिक्रियावादी क्रान्तिको सामना गर्नुपर्नेछ, र यसले प्रतिक्रियाशील स्विच बनाउनको लागि लिनुपर्दछ।
वास्तवमै राम्रो लेख र राम्रो समर्थित सन्दर्भ। मैले महसुस गरेन कि गुगलले RWD का लागि यति धेरै समर्थन गरेको छ।
धेरै जानकारीमूलक लेख, वेबसाइट डिजाइन गर्ने क्रममा यी सबै बिन्दुहरू मेरो दिमागमा राख्नेछ। धन्यबाद
डिसे 4, 2013 मा 3: 12 AM
वास्तवमै राम्रो लेख: D
अगस्ट 6, 2014 मा 2: 35 AM
यो लेख भरखरै आएको थियो तर यो अझै उपयोगी छ। मैले अन्ततः मेरो वेबसाइटहरु लाई उत्तरदायी बनाउने निर्णय गरें, र यो एकदम राम्रो तरीकाले काम गरिरहेको छ! विशेष गरी यस वर्ष गुगलको मोबाइल एसईओ अपडेट पछि।